ဟင်းရည် – Everybody Read TChen
Oh Skand…what have you missed…..
မနေ့ညက ဝက်သားဆီပျံ ချက်စားကြမယ် လို့ မောင့်ကို ပြောပြီး ညနေကတည်းက အလုပ်ကနေ ဖုန်းဆက်ပြီး ဝက်သား ချခိုင်းထားပါတယ်။ ဝက်သားကတော့ ထုံးစံ အတိုင်း အသား နံပါတ်တစ် ကွာလတီ ပါရာဂွမ် ကနေ ဝယ်လာတာပေါ့အေတို့ ရယ်။ အဲ့တာနဲ့ ချက်စားကြမယ် ဆိုတော့ ထုံးစံအတိုင်း ဝက်သားဆီပျံ တော့ စားချင်ဘူး အပြောင်းအလဲ လေးဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ တနေ့က ဘတ်ထားတဲ့ လွယ်ကူစားမြိန် ရဲ့ ကြက်သားဆွမ်းချက် ဆိုတာ ကို သဘောကျနေပါတယ် အဲ့မှာ ပါတဲ့ သရက်သီး သနပ် ထည့်တာ ကို သိပ်သိပ် စိတ်ဝင်စားနေတာပေါ့။ ချဉ်ပြုံးလေး ဖြစ်မှာပဲ ဆိုပြီးတော့လေ။ သူကလဲ အဲ့ဒီ နည်းကို အဖြူရောင်နတ်သမီး ဆီက ရတာပါတဲ့ တဆင့်စီပေါ့။ အားလုံး ကျေးဇူး တင်ပါတယ်။ တီချမ်းဆီရောက်တော့ တီချမ်းနည်းပေါ့နော်။ ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ ဟုတ်လား ပြောပြမယ်လေ ဖြေးဖြေးပေါ့ မလောပါနဲ့…..
ဖြစ်ပုံက ဒီလိုပါ မောင့်ကို ချက်စားကြမယ် ပြောထားတော့ မောင်က ထုံးစံအတိုင်း ကြက်သွန်ဖြူ နီ ကြိတ်ထားပြီးသားဖြစ်နေတယ် အဲ့တာနဲ့ သူတို့ လို မချက်တော့ပဲ တခါတည်းပဲ ဝက်သား ကို တုံး ဆားအချိုမှုန့် ငါးငံပြာရည် နည်းနည်းရယ် နနွင်းနည်းနည်းရယ် ငရုတ်သီးမှုန့် အရောင်တင် အစိမ်းမှုန့် နည်းနည်း ရယ် နဲ့ နယ် ပြီး နှပ်ထားတယ်။ နောက်တော့ ဆီနဲ့ ဝက်သား ကိုအရင်သတ်ပါတယ် ကြက်သွန်ဖြူ နီ မထည့်သေးပါဘူး ဝက်သားတွေ နည်းနည်း လုံးသွားပြီ မွှေးတက်လာပြီ ဆိုမှ ကြက်သွန်ဖြူနီ ထည့်ပါတယ် ပြီးတော့ သရက်သီး သနပ် ၂ ဖတ် ၃ ဖတ် တော့ ကဘူး ၄ ၅ ၆ ဖတ်လောက်ကို ထည့်ပလိုက်တယ် အေးရော…..နောက် တော့ ခဏ ထပ်ကြော် ရေ ထည့် ပြီး နူး တဲ့ အထိ တည်ပလိုက်တာပဲ ဆီပျံလေးပေါ့အေ နောက်ဆုံးတော့လဲ သို့သော် သရက်သီး သနှပ် ထည့်ထားလို့ အရသာကတော့ တီ မှန်းထားသလိုပဲ ချဉ်ပြုံးလေးဗျ မိုက်မှမိုက်ပဲ အိုအိရှိ အရသာရှိ ကောင်းမှကောင်းလေ……….ပုံသာ ကြည့်ကြပေတော့……
ဖြစ်ချင်တော့ အိမ်မှာ ဆန်ကုန်နေပါတယ် ကိုယ် ပရီးမီးယား ၂ အန် ၁ ကော်ဖီ နဲ့ သောက်နေကျ နွားနို့ကလဲ ကုန်နေပြန်ပါတယ် ဟင်းချက်ကာနီး ကျမှ ဆီကလဲ ကုန်နေပြန်ပါတယ် အဲ့တာနဲ့ မောင့်ကို ၇=၁၁ ကိုလွှတ်တော့ ဒင်းက ဝက်သားချဉ်ပါ ဝယ်လာပါတယ် ကိုယ်မသိအောင်ပေါ့လေ ထားတော့ ထုံးစံအတိုင်း ပဲ ကြက်သွန်နီ ပါးပါးလှီး ပြီးတော့ ဆား အချိုမှုန့် နည်းနည်း ငရုတ်သီးစိမ်းလေးတွေပါးပါးလှီး ပြီး သံပရာရည်လေးနဲ့သုပ်ပါတယ်။ ဒါကလဲ ကောင်းမှကောင်း စူပါရှယ် အိုအိရှိ ပဲ………..
ဒါကတော့ တနေ့ က ဈေးထဲက တွေ့တဲ့ မျှစ်ပြုတ်တို့ ရယ် ထူးထူးဆန်းဆန်း ရှာတွေ့တဲ့ ဟင်းကလာချဉ်ဖတ်ရယ် ပါ ဒါတွေကတော့ ဝယ်တာဆိုတော့ အထွေအထူးပြောစရာမလိုပေါ့…
ဒါကတော့ သူငယ်ချင်းကို ဖုန်းဆက်ခေါ်တော့ သူက ဝက်သားဆီပျံ အသံလဲကြားရော စွန်တန်သောက် ချင်ပါတယ်တဲ့ အိုကေပေါ့ သိပ်လွယ်တယ်လေ ချက်ရတာ ရေ လိုသလောက်ထည့် ဆူအောင် အရင်တည်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ရေဆူလာတော့ စွန်တန်ဖတ် ထည့်ပါတယ်။ အချဉ် ကြိုက်ရင် ပိုထည့် ခရမ်းချဉ်သီး နှစ်လုံး ကို ၆ စိပ်စီ နဲ့လှီး ပြီး ပစ်ထည့် ငရုတ်သီးစိမ်းလေးတွေကို ဓါးပြားရိုက်…၈ တောင့်ပါ။ ကြက်သါန်နီ ၂ ဥ ကို ၈ စိပ်စီ လှီး ပြီးတော့ ရေဆူတာနဲ့ အကုန်ပစ်ထည့်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဝက်သားတုံး ခနော်ခဲ နှစ်တုံး ပစ်ထည့်လိုက်ပါတယ်။ တခါ ထပ်ဆူရင်တော့ အပေါ့အငံမြည်း ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အနေအထား ရရင် အိုချ လိုက်လို့ ရပါပြီ။ ဒါလေးကလဲ ရှုးရှဲစပ် ချဉ်စူး လေးနဲ့ မိုက်မှမိုက်ပါပဲ…..ဂွတ်ထ အန် သည်ဘက်စ် ပေါ့
အမှန်ကတော့ နံနံပင်လေး ထပ်ထည့်လို်က်ရင် သည်ဂွတ် သည်ဘက်တာ သည်ဘက်စ် တောင် မက သည် ဂရိတ် တောင်ဖြစ်သွားအုံးမယ် မွှေးမွှေးလေးနဲ့ လေ ခုတော့ မရှိတော့ ထားပါတော့… ရှိတာလေးနဲ့ ကောင်းအောင် အရသာရှိအောင် ချက်တတ်တာ က မှ အိမ်ထောင်ရှင် မိန်းမကောင်းမှလား…..ငှဲငှဲငှဲ….
ကဲ ချုပ်ရရင်တော့ ပရိတ်သတ်ရယ် စဉ်းစားကြည့်ပါ ဝက်သား သရက်သီးသနှပ် ချဉ်အီပြုံးလေး ဝက်သားချဉ်သုပ်လေး အတို့အမြုပ်ကလေး၊ စွန်တန် ရှုးရှဲစပ်ကလေး နဲ့ ဘယ်လောက်များ ထမင်းမြိန်လိုက်မလဲလို့ ကိုယ်တို့ ၃ယောက် (ကိုယ်ရယ် မောင်ရယ် သူငယ်ချင်းရယ်) အုပ်လိုက်ကြ တီးလိုက်ကြ လွေးလိုက်ကြ မြိန်လိုက်ကြတာ ထမင်း ၃ လုံးချက် ကုန်သွားပါတယ် ခါတိုင်း ၃ လုံးချက်ရင် ကိုယ်တို့ လူ ၅ ယောက် စားကြတာပါ ဆန်ကောင်းသုံးတော့ အီတယ်လေ (ညှင်းညှင်းညှင်း)
အဲ့တော့ ပရိတ်သတ်ကြီးလဲ သွားရည်ကျ ရအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ချက်နည်းတွေကတော့ တင်ပြီးသားတွေပါ စားကြပါအုံးနော်………….
Posted on July 5, 2011 February 7, 2018 Categories Uncategorized, Uncategorized, ဆီပျံ, တီချမ်း ဟင်းချက်ခြင်း, ဟင်းရည်, အသုပ်များ10 Comments on Oh Skand…what have you missed…..